Taratasim-pifandraisana RV : mpinamana ao amin’ny Yoti mikaroka ny fiantraikan’ny lalànan’ny maripamantarana nomerika amin’ireo vondrom-piarahamonina an-jorom-bala indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2019 16:09 GMT
Fanamarihan'ny Rising Voices : Ny taratasim-pifandraisana avoakanay in-droa isan-kerinandro dia mamintina ireo lahatsoratra nivoaka vao haingana ao amin'ny bilaoginay mikasika ireo endrika maro amin'ny fampiatiana ara-nomerika izay ahitàna ireo fidirana sy fanekena ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba sy fahafahana isankarazany ahafahan'ireo vondrom-piarahamonina handray anjara feno aty anaty tambajotra. Vakio ato ireo famoahana teo aloha amin'ity taratasim-pifandraisana ity.
Tadidinao ve ilay Fandaharanasan'ny fiarahan'ny mpinamana Yoti izay nozarainay taminao volana vitsy lasa izay ? Nampahafantarina tamin'ny 2019 ny mombamomba ireo mpinamana ao amin'ny Yoti Nomerika ka i Subhashish Panigrahi, namana mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Rising Voices no iray voafidy tamin-dry zareo mba “hanatontosa ny fikarohana mifantoka amin'ny haino aman-jery natao mba hanamafisana ireo fanamby sy ireo fahafahana any anatin'ireo vondrona natao anjorom-bala izay tena iantefan'ny (na tsy ho ela dia ho izay) Aadhaar.”
Efa niaraka tamin'ny Rising Voices hatramin'ny 2016 i Subhashish no sady efa naharitra ela tao amin'ny Global Voices. Mpanao horonantsary fanadihadiana izy, mpikambana mavitrika ao amin'ny Mozilla sy ny Wikipedia no sady mpiara-mamorona ny O Foundation. Vao haingana, nandray anjara tamin'ny fanentanana @AsiaLangsOnline ihany koa izy ary izy no vahiny nasainay voalohany momba ny fiteny Odia. Mahafaly anay ny fiarahan'i Subhashish miasa amin'ny Yoti ka te-hanasa anao izahay hamantatra bebe kokoa ny momba azy sy ireo mpikambana roa hafa ao amin'ny Yoti. Vakio sy araho ny fanavaozam-baovaon-dry zareo ao amin'ny bilaogin'ny Yoti.
FANAMPINY AVY AMIN'NY BILAOGY RISING VOICES
Ho fankalazana ny taona Iraisam-pirenena ho an'ny fiteny indizeny 2019 (#IYIL19), dia nanambatra hery tamin'ireo mpiara-miasa aminay ny Rising Voices tamin'ny fikarakarana ireo fanentanana efatra ifandimbiasana ao amin'ny Twitter mba hanasongadinana ny asan'ireo mafana fo amin'ny fiteny indizeny manerantany. Raha liana amin'ny satan'ny fiteny indizeny maneran-tany sy izay mahakasika ny famelomana sy/na fampiroboroboana azy ireny ianao, miangavy anao hanaraka ny fanentanana ataonay ao amin'ny Twitter ! Ary raha te-hahalala bebe kokoa ny momba ny vahininay farany teo ianao, dia azonao jerena tsy amim-pihambahambana ny mombamomba ny lahatsorany araka izao manaraka izao :
Adaobi Anukwu ho an'ny fiteny Igbo any Nizeria
Uzoma Ozurumba Ihechiluru ho an'ny fiteny Igbo any Nizeria
Joaquín Yescas Martínez [es] ho an'ny fiteny xhidza (Zapotec), tenenina any Sierra Juárez, Oakzaka, Meksika
Victoriano De la Cruz Cruz [es] ho an'ny fiteny Nahuatl, tenenina any Chicontepec, Verakrozy, Meksika
Janak Raj Bhatta ho an'ny fiteny Doteli, tenenina any Nepala
Ramjit Tudu ho an'ny fiteny Santali, tenenina any India sy ireo firenena manodidina sasany
Ho an'ny ankamaroantsika, zavatra ataontsika isanandro tsy mahatsemboka akory ny manoratra amin'ny kitendry. Fa angamba tsy tokony ho raisintsika mora foana izany… → “Mivondròna ao ambany rafitra iray tahaka ny fiomanan'i Myanmar hiala amin'ny Zawgyi ho amin'ny Unicode ”
FAHAFAHANA | VATSIM-PIANARANA& FIARAHANA
Misy hevi-dehibe ho an'ny fiovàna ara-tsosialy ve ? Te-hampiasa vola ao aminao ny Voqal, miaraka amin'ny vola mitentina 30.000$ sy ireo fandaharan'asany voatokana, mba hanombohan'ny orinasa sosialinao sy hiroboroboany. Efa misokatra izao ny fisoratana anarana ho amin'ny fiaraha-miasa Voqal 2020. Azafady, jereo ato ny antsipirihany sy ny fomba firotsahana. Misy ihany koa ny tranonkala iray ahafahanao misoratra anarana raha mila fanazavàna fanampiny. Fara-fisoratana anarana : 27 Septambra 2019.
Misokatra ny fisoratana amin'ny fiarahan'ny mpinamana amin'ny Gabo momba ny fanaovan-gazety ara-kolontsaina 2019, izay karakarain'ny Gabo Foundation sy ny ministeran'ny Kolontsaina Kolombiana. Raisina an-tsitrapo ireo mpanao gazety mahazo teny anglisy manerantany mba hanararaotra io fahafahana io ka handray anjara amin'ny Tsenan'ny Kolontsaina karaibeana faha-11 sy hanolo-tena amin'ny fanaovan-gazety ara-kolontsaina. Azafady, jereo ato ny antsipirihany. Fara-fisoratana anarana : 07 Oktobra 2019
Misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny lokan'ny Fanaovan-gazety ho an'ny Rariny arak'Asa 2019, karakarain'ny Fitsarana ambony Breziliana momba ny asa. Ny asan'ny ankizy no lohahevitra amin'ity taona ity. Raha toa ka namoaka asa an-gazety tamin'ity lafiny iray ity ianao, teo anelanelan'ny 1 martsa 2018 ka hatramin'ny 30 Aogositra 2019, dia angamba mendrika hohadihadiana ny tamin'izany [pt-BR]. Marihina tsara fa ny asa vita dia tsy maintsy avoaka sy aparitaka amin'ny teny portiogey. Fara-fisoratana anarana 16 septambra 2019.
Ny fifaninanana maneran-tanin'ny Mpihevitra ny sosialy (Global Social Thinkers Contest) : Mihevi-tena ho mpihevitra ny sosialy maneran-tany ve ianao ? Maniry hampiroborobo ny fiovana ara-tsosialy maneran-tany ? Ny mpikarakara ny Impact!Africa Social Entrepreneurship dia manasa anao hizara ny asa vitanao, na izay mbola ataonao, any Afrika. Azafady, jereo eto ny antsipirihany. Fara-fisoratana anarana : 10 Oktobra 2019.
IREO HETSIKA & FIVORIANA ATO HO ATO
Hatao any amin'ny foiben'ny UNESCO any Parisy ny fivoriana Iraisam-pirenena momba ny teknolojian'ny fiteny ho an'ny rehetra (LT4All), hetsika karakarain'ny #IYIL2019 atao amin'ny volana Desambra izao. Hofakafakain'io kaonferansa io ny fomba mety hanosehan'ny fizarazaràna ara-nomerika misy ankehitriny an'ireo fiteny tsy dia ampy hery loatra ho amin'ny fahalevonana, sy ny vahaolana azo ampiharina hiatrehana ireo fanamby amin'izao fotoana izao. Marihana fa izay nahazo fanasana ihany no afaka manatrika ity hetsika ity ary izay ankolafy liana amin'izany dia asaina hijery ireo torolàlana momba ny fanehoana ny fahalinany mba ho isan'ny hahazo fanasàna sy ny antsipirihany hafa ato. Daty 5-6 desambra 2019.
Mety efa renao angamba ny hoe MozFest, hetsika fanaon'ny Mozilla isantaona, izay iarahan'ireo mpisaina sy mpaniry hitondra zava-baovao hisian'ny aterineto tsaratsara kokoa mihaona, mifandray ary mifampianatra. Hatramin'ny niforonany tamin'ny 2010, dia tena nivoatra be ity hetsika ity ka nahazo mpandray anjara maherin'ny 2.500 tamin'ny taona lasa. Ho fandrefesana ny fiantraikan'ilay hetsika malaza dia nanao tombatombana ny Mozilla ary nizara izay zavatra hitany ato. Vakio ato raha liana amin'izany ihany koa ianao !
Mingma Lama Sherpa ao amin'ny Himali Manthan miaraka amin'i Doma Sherpa natolotry ny YOHO TV tamin'ny alalan'ny YouTube
El presente y futuro de las Lenguas Indígenas en Internet [es] natolotry ny Festival de Lenguas Indígenas en Internet FLLii2019 tamin'ny alalan'ny YouTube
Fiteny Afrikana amin'ny maha-teny indizeny azy : Famaritana avy amin'i Beyond Niamey
Fiteny Afrikana amin'ny maha-teny indizeny azy : ohatra avy amin'i Beyond Niamey
TakNet – Tambajotran'ny vondrom-piarahamonina any Tailandy avy amin'ny bilaogy APNIC
Nahoana no manoratra amin'ny Yorùbá ao amin'ny aterineto ?avy amin'ny bilaoagy SOAS
Tenin-dreny natolotry ny Kerning Cultures
Teny 50 : avy amin'ny fiarahabana amin'ny kangaroo, sarin-tany vaovaon'ny fiteny indizeny any Aostralia avy amin'ny The Sydney Morning Herald
Misorata anarana hahazo ny taratasim-pifandraisana Rising Voices
Isaorana i Eddie Avila Tamina'ny fandraisany anjara amin'ity taratasim-pifanakalozam-baovao ity.